zawg vs mm3 — MYSTERY ZILLION
zawg vs mm3
ဘာလို့ mm3 ကို စံထားပြီး သုံး တာ လည်း ဟင်။ zawgyi လည်း အဆင်ပြေနေတာ(အဆင်ပြေတာမ တော်တော်ပြေနေတာ) ကို အမ ဟတ် ထိုး ား(ဟတ်ထိုး မတွေ့ပါရွေ့) ပါ ရင် ခွေး လွတ်...Zzzz. xD<br>
zawgyi ကို ရော စံ ထား လို့ မ ရဝူးလား ဟင်.<br>
ဟုတ်တယ် ... ဟတ်ထိုးမတွေ့ ဘူး... ပြောပြပါအုံး နော....<br>
not zawgyi vs mm3 . we migrate to non-unicode to unicode just as usual . click <a href="http://blog.mysteryzillion.org/basic/unicode-guide/">here </a>to read the rest <br>
Thank @Morris , it's migrating. Not comparing. Please read following link<div><br></div><div>http://www.htootayzar.com/myblog/2011/01/why-unicode/</div><div>http://www.saturngod.net/knowledgebase/unicode-zawgyi-and-me</div><div>http://www.saturngod.net/knowledgebase/faq-about-uni</div>;
လက်ရှိ ဘာ keyboard သုံးနေတာလဲ။ အက္ခရာလား။ NHM လား။ keymagic လား။
<br>Most likely trying to type Unicode with zg keyboard.<br>
ဇော်ဂျီကီးဘုတ်နဲ့ ယူနီကုဒ်ဖောင့်မှာရိုက်နေတာ ဖြစ်နိုင်လောက်တယ်၊ မဟုတ်ရင် ဟထိုးရှာရမခက်ပါဘူး။ <br>